Arimaha Sharciga ee ugu Sareeya oo leh Blogging
Talaado, July 14, 2020 Sabtida, Janaayo 2, 2021 Douglas Karr
Dhowr sano ka hor, mid ka mid ah macaamiisheena ayaa qoray qoraal weyn oo blog ah waxayna raadinayeen sawir wanaagsan oo ay ku muujiyaan. Waxay isticmaaleen Raadinta Sawirka Google, waxay heleen sawir la sifeeyey inuu yahay mid aan boqortooyo lahayn, waxayna ku dareen boostada. Maalmo gudahood, waxaa la soo xiriiray shirkad weyn oo ka mid ah kuwa sawirrada saamiyada ka shaqeeya waxayna la shaqeeyeen biil dhan $ 3,000 si loogu bixiyo adeegsiga sawirka loogana fogaado arrimaha sharciga ee la xiriira
Monday, July 21, 2008 Sabtida, Juun 25, 2016 Douglas Karr
Waxaan go aansaday inaan dagaal la galo madbacad afduubtay cuntadayda isla markaana ku sii deyneysa waxyaabaha ku jira magiciisa iyo degelkiisa. Wuu socodsiinayaa oo lacag ayuu ka helayaa waxyaabaha ku jira boggeyga waana ku daalay. Daabacayaasha, oo ay ku jiraan kuwa wax qora, waxay xuquuq ku leeyihiin Sharciga Xuquuqda Millennium-ka ee Millennium. Waa maxay DMCA? The Digital Millennium Copyright Act (DMCA) waa sharci Mareykan ah (oo sharci loo dejiyay Oktoobar 1998) kaas oo xoojiyay ilaalinta sharciga